Vhidhiyo: Chakavanzika chekuba Mitsva yekutsvaga
Chakavanzika cheKuba Mitsva Inotsvaga Injini
Chishanu, January 6, 2012 Chishanu, January 6, 2012 Douglas Karr
Mangwanani ano ndiri kutumira yedu kutengesa kudzidzisa vanhu skrini ... peji 1 rekutsvaga Sandler kutengesa kudzidziswa. Yakasarudzika nezve mhedzisiro yemapeji ndeyekuti pane vhidhiyo mhedzisiro mairi - yeCharlotte Sandler yekudzidzira nzvimbo. Musoro wevhidhiyo uye tsananguro zvakagadziridzwa zvakanaka kuti zviitwe mumhedzisiro yekutsvaga.
Vhidhiyo iyi inotora kutarisisa kwakawanda semufananidzo wega unoratidzwa papeji, uye ndine chivimbo chekuti chiyero-chekupfuura chakanaka. Iyo rondedzero yevhidhiyo inotangawo neiyo link back yakananga kune yavo yemabhizimusi saiti, zvakare, kubatsira kutyaira shanduko. Kambani yavo yemubereki yemubereki haivabvumidze kukwidzirisa kana kushanda pawebhusaiti yavo, saka kugona kuisa mavhidhiyo ingave iri nzira hombe pane idzi nzvimbo dzekudzidzisa kunyatso kutarisisa pane injini dzekutsvaga.
Kwete chete iyo Youtube ndiyo iyo yechipiri huru yekutsvaga injini munyika, ivo zvakare vanoratidza mhedzisiro yevhidhiyo sechikamu mune dzakawanda mitsva yekutsvaga injini paGoogle. Vanhu vazhinji havangodi kuverenga… ivo vanoda kusvetukira mukati muvhidhiyo. Nekuda kweizvozvo, vhidhiyo yanga iri chakavanzika chenguva refu chemakambani ekutengesa anopinda, kunyanya pamapeji ane makwikwi ekutsvaga ekutsvaga. Muenzaniso uri pamusoro uyu wakanaka ... pamwe neSandler kutengesa kudzidziswa mumaguta ese makuru, ivo vese vari kukwikwidza chinzvimbo uye makwikwi emakambani ekudzidzisa ekutengesa anodawo mitsva yekutsvaga futi!
Vhidhiyo iri kukurumidza kuve chikamu chakakosha chekambani kugona kuzivisa vatengi, mabasa emusika uye kuwedzera kuvepo kwewebhu. Kuvaka Youtube chinzvimbo chinzvimbo mune yedu SEO software inopa vatengi vedu ruzivo rwakakosha kuona bhizinesi ravo kana sevhisi inowanikwa papeji rekutanga reYouTube uye zvakare Google. Krista LaRiviere, Cofounder uye CEO, gShift Labs
Vhidhiyo yakakosha, kutaura zvazviri, kuti makambani anoda gShift Labs zvabatanidzwa YouTube vhidhiyo yekutevera zvakananga mumapuratifomu avo ekutsvaga injini:
gShift Labs yakapawo vatengi vavo vhidhiyo kuti ivabatsire kukwidziridza yavo YouTube mavhidhiyo ekuvandudza chinzvimbo:
Musoro weposita, tsananguro uye ma tag ndiwo makiyi ekushandisa mazwi akakosha mushe. Edza kushandisa mazwi akakosha semazwi ekutanga kwete pakati nepakati kana pekupedzisira mazwi mumusoro uye tsananguro. Kana iwe urikusundidzira vashanyi kudzokera kune yako saiti, isu tinokurudzira zvikuru kuisa URL sechikamu chekutanga chetsananguro. Youtube inongoratidzira mutsetse wekutanga wetsananguro kunze kwekunge iwe wabaya kuwedzera, saka kuve nechero chinongedzo chakaratidzwa chinogadzira traffic yakawanda kudzoka kune yako saiti.
Mar 31, 2012 pa 3: 13 AM
Douglas, zvakanaka iwe watsanangura kukosha kwemavhidhiyo. Asi ndiudze chinhu chimwe: Ini ndinofanira kuisa yangu yega vhidhiyo kana ini ndinogona kungotora vhidhiyo inoenderana kubva kuYouTube, semuenzaniso?
Ini ndinobvunza izvi nekuti kazhinji, mabloggi haana zviwanikwa zvekurekodha vhidhiyo uye kurodha pasi.